Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kuvimbisa New Anticancer Makomisheni
Chirwere chegomarara chiri pakati pezvikonzero zvikuru zverufu munyika dzakawanda uye chiri kuramba chichiva mutoro mukuru munzanga. Rimwe rematambudziko makuru ekugadzira marapirwo ekurwisa chirwere chinouraya ichi ndechekuti mishonga inofanirwa kunanga maseru egomarara chete uye kuve nemhedzisiro shoma sezvinobvira. Pakati pemakomisheni mazhinji arikuongororwa pari zvino, musanganiswa weboron dipyrromethene (BODIPY) ine simbi-organic macrocycles (MOCs) uye simbi-organic frameworks (MOFs) inoratidza kugona kukuru kwete chete kurwisa cancer zvinobudirira, asi kubatsirawo vaongorori kunzwisisa chirwere nani.
Muchinyorwa chekuongorora chechangobva kuitika chakabudiswa muCoordination Chemistry Reviews, boka revasayendisiti rinotungamirirwa naPurofesa Chang Yeon Lee naGajendra Gupta veIncheon National University, Korea, vakakurukura nezvekushanduka-shanduka uye kufambira mberi kwezvino mumunda weBODIPY-based MOCs uye MOFs, ne tarisa pane izvo zvinogoneka zvemakomponi sesese mishonga yekurwisa cancer uye maturusi ekutsvagisa cancer. Chinyorwa chinotsanangura macompounds 'akasiyana mabhenefiti uye kuwirirana nemamwe matekinoroji ekurapa uye zvakare anogadzirisa makuru maroadblocks kukushandiswa kwawo kwakapararira.
Saka, ndezvipi zvinhu izvi uye chii chinoita kuti zvive zvakanaka musanganiswa? MaMOC uye maMOFs masimbi ematare anoshanda semapuratifomu anochinja-chinja pane izvo zvitsva zvinoshanda zvinogona kuunzwa zviri nyore kuburikidza nekugadzirisa. Ose ari maviri anoshandiswa zvakanyanya mubiomedicine uye aratidza kugona seanticancer agents ane sarudzo yakanaka. Nekudaro, kana BODIPY ichishandiswa muMOCs kana MOFs, iwo mafotophysical zvimiro zvekomisheni inokonzeresa inogona kurongeka zvakanaka kuti iwane mhedzisiro dzakasiyana.
Chekutanga, BODIPY-based complexes akanaka photosensitizing agents for photodynamic therapy, umo mushonga unoshandiswa nechiedza kuparadza masero anotarirwa. Kana yakasanganiswa neMOCs kana MOFs, kushanda kweaya macomplexes semishonga yekurwisa cancer inowedzera. Chechipiri, BODIPY-based complexes inonzwa kune acidity (pH) yepakati. Nekuti mamwe mamota akashata anoita kunge ane pH yakaderera (acidic), aya makomisheni anogona kugadzirwazve kuitira kuti angonangana nemasero ane cancer mukati memuviri nekushandisa nzira iyi. Chekupedzisira, asi chisiri chidiki, iwo fluorescent zvimiro zveMOCs uye MOFs zvinogona kugadzirwa kuitira kuti nzvimbo yavo mukati memasero igone kuteverwa zviri nyore vachishandisa fluorescence microscopy matekiniki. "Kureruka kwakanyanya kwekuisa BODIPY-based MOC / MOF mishonga mukati mekenza inorapwa ichabatsira molecular uye cell biologist kunzwisisa maitiro ekuita kweaya mamorekuru kurwisa cancer," anotsanangura Prof. Lee.
Kunyangwe zvimwe zvipimo zveBODIPY-based MOCs/MOFs, senge inopedza nguva synthesis uye yedu isina kukwana kunzwisisa kwehupfu hwayo, makomisheni aya anogona kuve vatambi vakakosha mukurwisa kwedu gomarara. "MOCs neMOFs dzakagadzirwa neBODIPY dzine zvese zvakakosha zvinodiwa kuti uve munhu akakodzera anorwisa gomarara," anopedzisa Prof. Gupta. Iva neshuwa yekuchengeta ziso kune aya mamorekuru epamberi uye mashura avangaunze kupasirese yecancer kurapwa uye kutsvagisa.
Rare Cannabis Compounds Yakaratidzirwa Kudzivirira Covid-19 Utachiona
Nyowani Yekuvheneka Sarudzo yeVarwere vari paNzvimbo Yakakura ye...
Nzvimbo dzendege dzakanakisa uye dzakaipisisa pasirese dzebhizinesi...